Haddii uu tago Ashley Young xiddiga ay Kooxda Man United ka dhiganayso Kabtankeeda joogtada ah oo la sii ogaaday – Gool FM
Haddii uu tago Ashley Young xiddiga ay Kooxda Man United ka dhiganayso Kabtankeeda joogtada ah oo la sii ogaaday
Haaruun January 11, 2020
(Manchester) 11 Jan 2020. Haddii uu baxo Kabtanka rasmiga ah ee haatan Ashley Young, kooxda Manchester United ayaa la ogaaday xiddiga ay ka dhiganayso kabtankeeda joogtada ah.
Harry Maguire ayaa la soo warinayaa in loo magacaabi doono kabtanka joogtada ah ee kooxda Manchester United ka hor inta uusan Ashley Young u dhaqaaqin naadiga Inter Milan ee waddanka Talyaaniga.
Young kaasoo calaamadda hoggaaminta kooxda Man United ka dhaxlay Antonio Valencia, si joogto ahna ula wareegay xagaagii la soo dhaafay ayaa si xoog leh loola xiriirinayaa inuu suuqan kala iibsiga xiddigaha ee haatan socda u dhaqaaqayo kooxda ka dheesha horyaalka Serie A ee Inter Milan.
Maguire inkastoo uu Man United ku soo biiray kaliya suuqii xagaaga, haddana waxaa lagu ammaanay doorkiis hoggaaminta ee gudaha garoonka dhowr jeer oo uu xirtay calaamadda xushmadda kooxda.
Wargeyska Daily Mail ayaa warinaya in xiddiga reer England si joogto ah loogu gacan gelin doono calaamadda kabtannimo ee Man United, marka uu Young kooxda ka tago.
Saxiixa rikoorka ah oo ay Man United suuqii xagaaga ku soo qaadatay adduun dhan 80 milyan oo gini ayay kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford si joogto ah ugu aaminaysaa marada Kabtannimo, sida wararku ay sheegayaan.
Shaxda rasmiga ah ee Kooxaha Crystal Palace vs Arsenal oo la shaaciyey... (Pepe oo ku bilowday safka hore ee Gunners)
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Man United Iyo Norwich City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey